[Beyond Fest 2020] Famerenana: 'Archenemy' Mandray an-tanana ny maherifo sy ny voninahitra taloha - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly [Beyond Fest 2020] Famerenana: 'Archenemy' Mandray ny maherifo sy ny voninahitra taloha
Vaovao Mahafaly Fialam-bolyFampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana)
[Beyond Fest 2020] Famerenana: 'Archenemy' Mandray ny maherifo sy ny voninahitra taloha
by Jacob Davison Oktobra 17, 2020
nosoratan'i Jacob Davison Oktobra 17, 2020
Ny karazana mahery fo mahery indrindra tato anatin'ny taona maromaro dia nanjary andrin'ny kolontsaina sinema sy pop, na tsara na ratsy. Amin'izany, ho an'ny franchise lehibe toa The avengers, Batman, Spider-Man ary toy izany hatrany, dia nanandratra ny fampifanarahana ny boky tantara an-tsary tamin'ny fanararaotana an-tapitrisany dolara. Saingy mbola misy karazan-tantara maro samihafa hotantaraina ary maro no azo ambara avy amin'ny tany, fa tsy ny lanitra. Toy ny ahoana raha very ny herin'ny maherifo iray? Inona no ataon'izy ireo amin'izay? Ity ny set-up fahavalony lehibe indrindra.
Max Fist (Joe Manganiello, Ny tena marina) no maherifo mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao. Farafaharatsiny, izy. Ankehitriny, lehilahy tsy manan-kialofana izy ary mpisotro toaka mety hamitaka ny fahalehibeazana sy olana ara-pahatezerana. Manindrona rindrina biriky ary maniry ny ho afaka totohondry amin'ny tranobe toy ny nambarany fa azony atao. Izy dia ambany fahitana any amin'ny tanàna lehibe iray, nohajain'ny mpivarotra bartender ary noheverina ho toy ny fanelingelenana mandra-pihaona ny olona vonona hihaino azy marina. Hamster (Skylan Brooks, Ny saina maizina indrindra) dia vlogger sy mpitati-baovao ao an-toerana mitady scoop lehibe, ary hitany ny fahafahany miaraka amin'i Max. Na dia manana fisalasalana momba ny tantaran'i Max Fist mahatalanjona mahery fo faran'izay mahery fo sy ny Archenemy ratsy fanahy avy amin'ny tontolon'ny tranony aza izy ireo, farafaharatsiny hanao fialamboly izy ireo. Fa mila ny fanampian'i Max izy rehefa Indigo rahavaviny (Zolee Griggs, Bit) voafandrika amin'ny The Manager (Glenn Howerton, Sunny foana any Philadelphia) crimelord masiaka izay maniry an'i Indigo amin'ny fangalariny. Ankehitriny ireo mpiray tampo dia tsy maintsy miara-miasa amin'i Max Fist ary hahitana raha marina ny tantarany na raha adala izy. Sa mety samy izy roa?
fahavalony lehibe indrindra avy amin'ny mpanoratra / talen'ny Adam Egypt Mortimer, izay nanome antsika ny sary mihetsika horonantsary momba ny saina sy ny saina tamin'ny taona 2019 Tsy tena izy i Daniel. Tahaka ny tetikasany farany, dia nanao zavatra manohitra ny fametahana azy ho lasa karazana na fomba tokana izy. fahavalony lehibe indrindra dia sary mihetsika amin'ny asan-jiolahy, mampientanentana ara-tsaina, sarimihetsika mahery fo mahery mitodika any an-dohany. Ary tsy mety ho tonga amin'ny fotoana tsara kokoa izany. Na dia tsy hiteny aza aho hoe marary ny olona amin'ny sarimihetsika mahery fo mahery vaika, misy ny havizanana miorina amin'ny fetran'ny tantaran'izy ireo. Ary io dia mandalo eo amin'izy ireo. Ny marina sy ny delestazy an'i Max Fist dia voatazona eny amin'ny habakabaka, miaraka amin'ny fanondroana sy fiolanana izay hahatonga ny mpijery hanontany ny fahamarinan'ny lazain'ny Super. Saingy tsy hisalasala izy ireo fa milina mpiady izy.
Joe Manganiello dia manome helo fampisehoana ho Max. Alao sary an-tsaina ny Thor na Superman sosotra iray miady amin'ny fahaverezan'ny maha-izy azy, ny heriny. Na dia adala aza izy dia tsy azonao atao ny mangoraka ilay tovolahy, na dia totohondry aza ny rindrin'ny biriky mba hahatsapany zavatra iray ary azony atao mangana ny karandohany amin'ny tanany. Fa avy eo indray, mety ho fisaorana fotsiny noho ny zava-mahadomelina sy alikaola rehetra ao amin'ny rafitra misy azy. Skylan Brooks sy Zolee Griggs dia misongadina fa 'sidekicks' tsy fantany na dia manana saina sy lojika lavitra kokoa aza izy ireo noho ilay mahery fo very saina. Zolee as Indigo dia mampiseho hafetsena tsy hay hadinoina ary tsy manalavitra azy, na dia mifanohitra aminy aza ny olana ary apetraka amina toe-javatra mahery vaika miaraka amina basy ara-bakiteny izy. Hamster dia mpamaky mpanatrika tsara ary manome fanohanana ny tantaran'i Max Fist. Manome fomba fijery manerantany momba ny misteriny sy ny fifandraisany amin'ny tontolo andavanandro. Ary i Glenn Howerton dia mamirapiratra amin'ny maha-olon-dratsy azy tanteraka amin'ny maha-mpitantana azy tsy fantatra. Manisy quirks sasany amin'ny kingpin heloka bevava tena mampidi-doza sy mora tezitra.
Sary avy amin'ny Youtube
Mampatahotra ny seho hetsika isaky ny mivoaka i Max Fist. Na amin'ny pipa, basy, na eo an-tanany toa tsy vaky fotsiny io dia i Max no nanao hena voatoto avy amin'ny olona rehetra nanodidina azy. Indrindra raha tsy mahay inebriated izy. Ary ny delestazy taloha sy mety nataon'i Max dia tanterahina am-pahendrena miaraka amina andiana endrika tantara an-tsarimihetsika mihetsika sy tsy azo ihodivirana. Ny fiavian'i Max dia tontolon'ny nofinofy amin'ny tantara an-tsary, noho izany dia misy dikany ihany ny anehoana azy ireo. Izy io koa dia mahatonga ny fifanoherana mahaliana eo amin'ny lafiny sci-fi sy ny zava-misy i Max izay hita fa voafandrika ao anatiny. Mihodinkodina sy mihodinkodina ireo zotram-piaramanidina, na dia nisy fotoana aza nitarihana kely.
Nanam-bintana aho fa niaina izany fahavalony lehibe indrindra tao amin'ny Beyond Fest 2020 tao amin'ny Mission Tiki drive-in ary fipoahana teo amin'ny efijery lehibe io. Ary koa, ny mpilalao sy ny ekipa anisan'izany i Adam Egypt Mortimer sy Joe Manganiello (Miaraka amin'ny alikany, Bubble!), Skylan Brooks, Zolee Griggs ary ny hafa anisan'izany ireo mpamokatra avy amin'ny Spectrevision dia nanatrika ny fiara Legion M ho an'ny photo-op sy ny intro.
Photo Credit Lisa O'Connor: Directeur / Mpanoratra Adam Egypt Mortimer, Joe Manganiello, Miboiboika ny alika ary Elijah Wood
fahavalony lehibe indrindra dia nampiala-voly toy ny fikorontanan'ny fo sy totohondry tarehy. Na dia mbola tsy mahalala ny anarana hoe "Max Fist" aza ny olona dia manantena izy ireo fa hampiasa vola toa an'i Hamster.
fahavalony lehibe indrindra dia hivoaka amin'ny 11 Desambra 2020.
2020hetsikaadama egyptiora mortimerfahavalony lehibe indrindraBeyond FestGlenn HowertonhorohoroJoe manganielloReviewSci-ny fiSpectreVision
Fetiben'ny sarimihetsika iHorror 2020: Jereo ny lisitr'ireo mpandresy!
'GI Joe: Operation Blackout' dia misiôna tsy nahomby